Talo ku wajahan shirka NSUM (Northern Somali Unionist Movement) ee St. Paul / Minniapolis, MN – Axmed M Xassan. – Radio Daljir
Luulyo 18, 2010 12:00 b 0
Columbus, July 17 – Marka hore waxaan guul u arkaa in NSUM suurtageliso shirka Minniapolis. Waa mid waqtigii loo baahnaa ku soo aaday. Waxaan ku baaqayaa inuu noqdo mid aqoonta iyo xaaladdu hagto ee uusan noqon mid caadifiyaddu hagto oo go’aamo degdeg ku jiro ka soo baxaan.
Ururka NSUM waxaa looga fadhiyaa laba weji mid uun:
1. Kuwo bulshada SSC ee tabaalaysan u diyaar ah inay hogaamiyaan gudo iyo dibadba, waqtiga iyo hogaaminta loo baahan yahayna soo bandhigayaa oo ku talogelaya. Haddii ay kooxdan yihiin waxaa u furan inay dhaliilaha jira sheegaan, isla markaana keenaan bedelka ay rabaan in la qaato. Waxaa kale oo u furan inay kooxaha kala duwan ee bulshada SSC ka kooban tahay tii ay doonaan garabka saaraan.
2. Kuwo ku aadaya qayb ka mid baahiyaha shacabka SSC oo wax ka qabanaya. Haddii ay kuwan yihiin, oo ay intii ay jireen ahaayeen, waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan wixii turxaan ah ee ay dusha uga tuurayaan garabyada is dhinac ordaya ee wada sheeganaya inay SSC u maqan yihiin ama xalkeeda u taagan yihiin ama metelaan. Badalkeeda waa inay shirweyne ku baaqaan ay ku kulmin karaan kooxahaas ama waa inay si guud talo wanaagsan oo guud ugu soo jeediyaan.
Ugu dambayn waxaan ugu baaqayaa bulshada SSC ee Minniapolis mu’ayid iyo mucaaradba inay shirkaas ka qaybgalaan oo suurtageliyaan in ra’yigooda la maqlo si danta guud looga wada shaqeeyo.
Guul Insha Allah shirka NSUM ee Minniapolis.
Warbixn ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaal/duqayn xalay ka dhacay xaafadaha Waqooyiga Muqdisho.